UNESCO, UNWTO ary Palestine: Etazonia sy Israely miala ao UNESCO
Home » Travel Associations News » UNESCO, UNWTO ary Palestine: Etazonia sy Israely miala ao UNESCO
Tamin'ny fivorian'ny UNWTO General General tao Chengdu, any Chine farany teo, teboka iray niresahana ny fanekena an'i Palestine ho mpikambana feno. Ny diplaomasia any an-dafy, ny faneren'ny Israel hiala an'i UNWTO, ary ny tsindry amerikanina dia nahatonga an'i Palestine hanemotra ny latsa-bato amin'ny fahazoana mpikambana ao amin'ny vondrona fizahan-tany manerantany mandritra ny 2 taona.
Ny United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) dia manana fiaraha-miasa akaiky amin'ny World Tourism Organisation (UNWTO). Tamin'ny taona 2011, nanaiky an'i Palestine ho mpikambana feno i UNESCO. Nangataka ny hiditra ho mpikambana feno ao amin'ny UNWTO i Palestine.
Izany dia niteraka ny lalàna amerikana izay nanapaka ny famatsiam-bola amerikanina ho an'ny fikambanana manaiky ny Palestiniana mahaleo tena. I Etazonia dia efa nandoa 22 isan-jato (80 tapitrisa $) amin'ny tetibolan'ny UNESCO isan-taona.
Toa hafahafa izany, satria ny UNESCO dia fikambanana toa tsy mahomby: ny asany lehibe indrindra dia ny manendry sy miaro ireo mari-pankalazana iraisam-pirenena ofisialy, antsoina hoe World Heritage sites - toerana toa The Alamo sy the Great Barrier Reef, the Grand Canyon. Inona no antony mety hananan'i Etazonia amin'ny fialana amina fikambanana natokana ho an'ny kolontsaina sy ny siansa?
Ny antony dia Palestine. Ny antony dia Israel.
Voalohany, notapahin'i Etazonia ny famatsiam-bola ho an'ny UNESCO taorian'ny nanekena an'i Palestina ho firenena mpikambana, ankehitriny ny filoha amerikana Trump kosa dia hiala ao amin'ny UNESCO amin'ny taona 2018, ary minitra vitsy taorian'izay dia naverin'ny Israel izany. Ny zon'ny Amerikanina nifidy dia nesorina tsy tapaka ary noho ny fianjeran'i Etazonia tamin'ny sarany ho mpikambana.
Tamin'ny 1984, ny fitondrana Reagan dia namoaka ny fahasosorany tamin'ny UN tao amin'ny UNESCO noho ny fiampangana ny anti-US, ny fiandohana Sovietika tany amin'ny ONU (naharitra hatramin'ny 2002 vao niditra indray i Etazonia). Izany koa no antony nahatonga ny Palestiniana, sosotra noho ny tsy fahombiazan'ny fifampiraharahana notohanan'i Etazonia hamoaka fifanarahana fandriam-pahalemana, ka noterena ho ekena ho fanjakana mpikambana ao amin'ny UNESCO: toerana iray izay nanamoran-tena tombon-tsoa ahazoana toerana ara-panjakana ara-panoharana, ary noho izany, raha ny teôria dia manome tsindry diplomatika bebe kokoa ny Israel hipetraka sy hifampiraharaha.
Ny Palestiniana dia nandrombaka ny mpikambana UNESCO 2011 tamin'ny 107-14 (na dia 52 aza ny fanjakana tsy nifidy). Saingy, tsy namokatra firy tamin'ny fomba fandrosoana tamin'ny fifanarahana fandriam-pahalemana israeliana-palestiniana io - ary mafy ny vokadratsin'ny fanapahana fanampiana ho an'ny UNESCO taorian'izay. Klaus Hüfner, manam-pahaizana momba ny UNESCO ao amin'ny Global Policy Forum, dia nilaza azy io ho "krizy ara-bola."
Etazonia dia tsy mpikambana ao amin'ny UNWTO. Midika ve izany fa tsy ho mpikambana intsony i Etazonia raha mbola mitohy ny fifanakalozan-kevitra hidiran'ny Palestine amin'ny fikambanan'ny fizahan-tany? Mpandinika izao i Palestine. Handao ny UNWTO ve Israely? Miandry ny fahitana azy ary politika maloto fitiavan-tena rahateo.
Ny praiminisitra israeliana Benjamin Netanyahu dia nidera ny fanapahan-kevitr'i Etazonia handao ny UNESCO ho "be herim-po sy ara-pitondrantena", hoy ny fanambarana iray.
Ny lehiben'ny Fikambanana Amerikanina misahana ny fampianarana, siantifika ary kolontsaina (UNESCO) dia naneho ny “nenina lalina” tamin'ny alakamisy noho ny fanapahan-kevitr'i Etazonia hiala amin'ny masoivoho.
“Fahaverezan'ny UNESCO io. Fahavoazana ho an'ny fianakavian'ny Firenena Mikambana izany. Fahaverezan'ny multilateralisme io ", hoy ny Tale jeneralin'ny UNESCO Irina Bokova tao anaty fanambarana.
"Zava-dehibe amin'ny oniversite ny iraka ataon'ny UNESCO hanamafisana ny fandriam-pahalemana sy ny filaminana iraisam-pirenena manoloana ny fankahalana sy ny herisetra, hiarovana ny zon'olombelona sy ny fahamendrehana," hoy ihany izy, ary nanamarika fa ny UNESCO dia hanohy hanangana taonjato faha-21 marina sy milamina ary tsy miangatra.
Tsaroan-dRamatoa Bokova fa tamin'ny taona 2011, rehefa nampiato ny fandoavana ny anjara birikiny ny mpikambana amerikana dia resy lahatra izy fa ny UNESCO dia tsy nisy dikany firy ho an'i Etazonia na ny mifamadika amin'izany.
"Mbola marina kokoa izany anio," hoy hatrany izy, "rehefa mitaky valiny maharitra ny fandriam-pahalemana sy ny filaminana mba hanoherana ny fanavakavaham-bolonkoditra sy ny fanoherana ny fanavakavahana, hiadiana amin'ny tsy fahalalana sy fanavakavahana."
Notsorin-dRamatoa Bokova ny finoany fa manohana ny hetsiky ny UNESCO ny vahoaka amerikana hampiasa teknolojia fianarana vaovao; manatsara ny fiaraha-miasa ara-tsiansa, haharitra ny ranomasina; hampiroborobo ny fahalalahana maneho hevitra, miaro ny fiarovana ny mpanao gazety; manome hery ny zazavavy sy ny vehivavy amin'ny maha mpanova sy mpampihavana; fiaraha-monina manatanjaka ny fiatrehana ny maika, ny loza ary ny fifandonana; ary mandroso fanabeazana mamaky teny sy manoratra.
"Na eo aza ny tsy fisian'ny famatsiam-bola, nanomboka ny taona 2011, dia nanamafy ny fiaraha-miasa misy eo amin'ny Etazonia sy ny UNESCO izahay, izay tsy nisy dikany velively", hoy izy nanamafy. “Niara-niasa izahay hiaro ny lova ara-kolontsaina iraisan'ny zanak'olombelona manoloana ny fanafihan'ny mpampihorohoro sy hisorohana ny herisetra mahery vaika amin'ny alàlan'ny fanabeazana sy ny fahaizana mamaky teny amin'ny haino aman-jery.
Ny fiaraha-miasa eo amin'ny UNESCO sy Etazonia dia “nanjary sarobidy”.
Ny Tale Jeneraly dia nanome ohatra momba ny fiaraha-miasa mandritra io fotoana io, toy ny fanombohana ny fiaraha-miasa manerantany ho an'ny zazavavy sy ny fanabeazam-behivavy ary ny fankalazana ny Andro manerantany ho an'ny fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety any Washington, DC, miaraka amin'ny fanafiana-pirenena ho an'ny demokrasia.
Notanisainy ihany koa ny tantaran'ny ezaka niarahan'ny rehetra, anisan'izany ny fiaraha-miasa amin'i Samuel Pisar, masoivoho manan-kaja ary ny iraka manokana momba ny fanabeazana Holocaust, hampiroborobo ny fanabeazana ho fahatsiarovana ny Famonoana Tambabe manerana an'izao tontolo izao hiadiana amin'ny antisemitism sy ny famonoana olona ankehitriny; fiaraha-miasa amin'ireo orinasa amerikana lehibe Microsoft, Cisco, Procter & Gamble ary Intel hitazomana ny zazavavy any an-tsekoly ary hikolokolo ny teknolojia ho an'ny fianarana kalitao; ary miara-miasa amin'ny US Geological Survey, US Army Corps of Engineers, ary ny fiarahamonina matihanina amerikana hampandroso ny fikarohana ho an'ny fitantanana maharitra ny loharanon-drano, ny fambolena.
"Ny fiaraha-miasa eo amin'ny UNESCO sy Etazonia dia lalina, satria nifototra tamin'ny soatoavina nozaraina," hoy Ramatoa Bokova nanamafy.
Ny fitanisana ny andalana tao amin'ny lalàm-panorenan'ny UNESCO tamin'ny taona 1945 nataon'i Archibald MacLeish, librarian'i Etazonia - "hatramin'ny nanombohan'ny ady tao an-tsain'ny olona, ​​dia ao an-tsain'ny olona no tsy maintsy ananganana fiarovana ho an'ny fandriam-pahalemana" - hoy izy nilaza fa io vina io dia tsy nisy ifandraisany velively , ary nanampy fa nanampy i Etazonia hanome aingam-panahy ny Fifanarahana manerantany UNESCO tamin'ny taona 1972.
Miantso ny asan'ity masoivoho ity «lakile hanamafisana ny fatorana lovan'ny olombelona amin'ny fiatrehana ny herin'ny fankahalana sy ny fisaratsarahana», hoy izy nanamarika ny lanjan'ireo torolàlana momba ny vakoka manerantany any Etazonia, toy ny Statue of Liberty, fa tsy hoe mamaritra ny marika amerikana fa miteny ho an'ny olona manerana an'izao tontolo izao.
"UNESCO dia hanohy hiasa ho an'ny rehetra manerantany an'ity Fikambanana ity, ho an'ny soatoavina zarainay, ho an'ny tanjona itovizantsika, hanamafisana orina multilatera mahomby kokoa ary tontolo iray milamina kokoa sy milamina kokoa," hoy Ramatoa Bokova namarana.
Fantatra amin'ny fanondroana toerana misy lova manerantany toa an'i Syria's Palmyra sy US Grand Canyon ity masoivoho ity.
Ny lohan'ny UNESCO, Irina Bokova, teo aloha dia niantso ny fisintomana an'i Etazonia ho raharaha “fanenenana lalina”.
Niaiky anefa izy fa "namoaka tolotra" tamin'ny fikambanana ny "fanaovana politika" tato anatin'ny taona vitsivitsy.
Ny fisintonana dia naneho fatiantoka ny "fianakavianan'ny Firenena Mikambana" sy ny fanavakavahana marolafy, hoy Rtoa Bokova nanampy.
Ny fisintomana an'i Etazonia dia hanan-kery amin'ny faran'ny volana desambra 2018 - mandra-pahatongan'izany dia mijanona ho mpikambana feno i Etazonia. Hametraka iraka mpanara-maso any amin'ny fikambanana any Paris i Etazonia hanoloana ny solontenany, hoy ny departemantam-panjakana.
Mampanantena traikefa mpandeha tsy manam-paharoa ao amin'ny seranam-piaramanidin'i New Istanbul ny fanavaozana ny teknolojia